Global Voices teny Malagasy » Mamoha Ilay Fifandonana Zeorziana-Armeniana Taloha Ilay Fifandirana Momba Ny Fiangonana Iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Oktobra 2017 15:47 GMT 1	 · Mpanoratra Eurasianet Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Armenia, Zeorzia, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika
Katedralin'i Kumurdo, fiangonana Zeorziana tamin'ny taonjato fahafolo ao amin'ny tanàna kely betsaka Armeniana izay sehatra nisehoan'ny fifandonana momba ny lovan'ilay fiangonana. (sary: Wikimedia Commons , Jaba1977)
Ity manaraka ity dia lahatsoratra fiaraha-miasa avy amin'ny EurasiaNet.org  nosoratan'i Joshua Kucera . Navoaka indray rehefa nahazoana alàlana.
Nampihendratrendratra sy niteraka tahotra be hoe hizotra ho any amin'ny adim-poko ny fifanolanana naterak'ilay fifandonana  momba ny ady fiangonana tany amin'ny faritra iray betsaka Armeniana any Zeorzia.
” Nampahatsiahy ilay adim-poko nahatsiravina tamin'ny fiandohan'ny taona 90 ireo fifandonana ireo” hoy ny filazan'ny  tranonkalam-baovao Democracy & Freedom Watch.
Tsy azo ihodivirana, fa nisy ireo karazana fiampangana fa hoe “fihantsiana” io fifandonana io. Maro no nanamarika fa taloha kelin'ny fifidianana monisipaly tany Zeorzia no nisehoan'io sombin-tantara io. Solombavam-bahoaka iray avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana, Georgian Dream, sady mpikambana amin'ny vondrona Fifankatiavana Armenia-Zeorzia, David Chichinadze, no niteny tao amin'ny onjam-peom-panjakan'i Armenia  fa “fihantsiana” nialoha ny fifidianana” izany.
“Na dia ireo Armeniana any Javakheti aza dia mihevitra fa “mampisalasala “ny vahoakan'i Kumurdo, hoy  ilay Zeorziana iray mpanadihady, Mamuka Areshidze. “Tsy tsara ny lazan'izy ireo. Tanàna tena mety hisintona mankamin'ny heloka bevava i Kumurdo. Tsy avahako fa ny ” fijaliana” niaretan'ny vahoaka ao Kumurdo dia nampiasain'ny sasany mba hanararaotana ilay toe-draharaha sy handrehetana fifandonana, amin'ny fampiasana ireo fitakiana mikasika ilay fiangonana.”
Fivoarana mampanahy izany na fandranitana na tsia. ” Ity trangan-javatra ity dia tahaka ny voa latsaka amin'ny tany efa lonaka tsara amin'ny fankahalàna vahiny, indrindra fankahalana Armeniana, naparitaky ny sasany, indrindra ireo mpomba ny Rosiana, any Zeorzia,” hoy ny soratra nataon'i  Dmitry Avaliani, Zeorziana mpanao gazety, ao amin'ny pejy Facebook-ny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/14/108410/
 lahatsoratra fiaraha-miasa : http://www.eurasianet.org/node/85401
 nisian'ilay fifandonana. : https://civil.ge/eng/article.php?id=30481
 niteny tao amin'ny onjam-peom-panjakan'i Armenia : http://www.armradio.am/en/2017/10/02/armenians-clash-with-georgian-police-after-attempts-to-erect-cross-stone-in-churchyard/
 soratra nataon'i: https://www.facebook.com/dimitri.avaliani.5/posts/10155699075797673